Leo And Pisces Ukuhambelana: ♥ A Ubudlelwane Beautiful - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Le miqondiso mibini ilawulwa ziintliziyo zabo, kodwa ukuze ubudlelwane babo buphumelele, kufuneka bazimisele ukufunda omnye nomnye kwaye baziqhelanise. Bobabini bayila ngokugqithisileyo kwaye bayathandana kwaye baya kusebenzisana ngokumangalisayo kuzo zonke iiprojekthi zobugcisa. U-Leo ukhutshiwe kwaye uya kubonakala enegunya kwiiPisces ezibuthathaka. Kulo manyano lwezichasi (umlilo namanzi), iqabane ngalinye kufuneka liqaphele ukuhambelana kwabo kwaye ngaloo ndlela lidibanise amandla abo. Kungenjalo, ukuzibophelela kuya kuba lilize kuba emva kwayo yonke loo nto, aba ngabantu ababini abakude kakhulu. Ngaba esi sibini siya kukwazi ukutyhila ubuthathaka babo kunye nokwakha uthando? Fumana ukuhambelana kweLeo kunye neAquarius kunye namanqaku othando apha.
'ULeo kunye neePisces banokufundisana kakhulu'
Inqaku lokuhambelana kweLeo kunye nePisces: 3/5
Le miqondiso mibini yezodiac inobuntu obahlukileyo, nangona kunjalo babenokwenza izinto zisebenze ukuba bobabini bayavuma ukubeka umgudu omkhulu. Emsebenzini, ubuntu Pisces iyila ngakumbi, kodwa ithande ukulandela ulwalathiso olucwangcisiweyo lukaLeo. Iintlanzi zinokunyamalala ngosuku olulandelayo ukuba uLeo akazihloniphi iimvakalelo zabo. Ngothando, uLeo unika ububele kwaye ubonisa ingqiqo, ngelixa iiPisces ziwela ngothando. ULeo ukhusela iiPisces, kwaye banokuchitha iiyure begonana. Njengoko bobabini bephethe, bakhumbuzana ngokunyaniseka kwabo. Ezi mpawu zimbini zahluke kakhulu zinokuhambelana enye kwenye ukuba benza umzamo omkhulu. Ngothando, uLeo uyondliwa ngokupheleleyo ngobubele, uthando, uvakalelo lwePisces.
Uthando lukaLeo noPisces lunokusebenza njani
U-Leo kunye neePisces bobabini banomona kunye nabalinganiswa abaphetheyo, yiyo loo nto kufuneka banyaniseke malunga neemvakalelo kunye neengcinga zabo malunga nokuthembeka. Kumsebenzi wabo wemihla ngemihla, u-Leo unokuphazanyiswa kukungabikho kwesenzo kunye nokuphupha kweePisces. Aba babini baya kuba ne ixesha elinzima lokuhlangabezana nokulindela uthando lomnye nomnye, kodwa ukuba bangasebenzisana bangaphumelela. Leo, i-romanticism kunye novakalelo lwePisces lutsala kwaye ukondla ngendlela ethile, kanye njengoko unokuba namandla okuqhuba kuyo. Ke, ubudlelwane bakho abuhambelani kodwa ayisiyiyo ilula! Ukungahambelani kweemvakalelo kuya kuhlala kukwi-ajenda yaba babini. Nangona kunjalo, ngothando iiPisces zinokuxolela kwaye ziqonde yonke into, oku kuthetha ukuba uthando luya kuhlala luloyisa.
Ukungaguquki kwihlabathi elifanayo kuya kukwahlula. Ulwalamano lwakho lukude nokuba luthe ngqo kwaye utshintshiselwano lwakho lunokwenzeka ukuba lube ne-enamelled iingxabano, iingxabano nokungaqondi! Bobabini bangabanini kwaye kufuneka baqinisekisane ngokunyaniseka kwabo. Kusenokubakho ubunzima obuninzi kuba uLeo wenza izinto kwaye iiPisces azizenzi ncam. Yiyo loo nto uLeo elindele inyathelo elingakumbi kwiiPisces okhetha ukuvela kamva kwaye ahlehlise izicwangciso.
Leo, eyakho amandla avuthayo aya kuvuyisa iqabane lakho kunye nabo inkanuko uya kukunika iimbono eziyingozi. Akukho nto igqitywe kwangaphambili! IiPisces ezithambileyo kakhulu ziya kuba ngumthandi ogqibeleleyo, ogxile kakhulu kwi-foreplay, kodwa xa uLeo ethatha izinto ngesandla, isingqisho siya kugqabhuka kakhulu!
Musa ukuvumela umona uchaphazele ubudlelwane bakho! Kuya kufuneka bafunde ukondla iiyantlukwano zabo kwaye bangalindeli ukuba enye ibe yile nto bayilindeleyo, ukuba bafuna ukuqhubela phambili ngokuzolileyo.
Lecabel, Ingelosi enguMgcini ekusikeleleyo ngengqondo evulekileyo
Njani Ukubonisana ngokuFunda kwengqondo kunye ne-Astrofame eSebenzayo